मोबाइल अपील - मोबाइल ल्यान्डस्केप अन्वेषण | Martech Zone
बुधबार, मार्च 20, 2013 एडम सानो
बच्चाहरू भन्दा बढी स्मार्टफोन अनुप्रयोगहरू? यसको बारेमा केहि थोरै डराउने देखिन्छ ... र उहि समयमा भयानक। अनुप्रयोगहरूको ल्यान्डस्केप समीक्षा गर्दा, त्यहाँ खेलहरूको एक टन देखिन्छ, तर व्यापार उत्पादकता अनुप्रयोगहरू पछाडि छन्। म निश्चित छु कि यी नम्बरहरू भविष्यमा नजिकै देख्नुहुनेछ, यद्यपि अधिक र धेरै उद्यम कम्पनीहरूले मोबाइल रणनीति अपनाउँदछन् तिनीहरूको दैनिक दिनको व्यवसायको रूपमा।
यो भनेको बिना नै जान्छ कि स्मार्टफोन र अन्य मोबाइल उपकरणहरू सर्वव्यापीताको स्तरमा पुगेको छ। होटेल रिजर्भेसन गर्नबाट प्रत्येक चीजको लागि, हाम्रो बैंक खाताहरू जाँच गर्न, पिज्जा अर्डर गर्ने र अधिकका लागि हामी प्रत्येक दिन प्रयोग गर्छौं। र एप्पल अनुप्रयोग स्टोर र गुगल प्लेमा १. million मिलियन भन्दा बढी अनुप्रयोगहरू उपलब्ध छन्, उपभोक्ताहरूसँग छनौट गर्न विकल्पहरूको असीमित मात्रामा छ। नयाँ रेलिक इन्फोग्राफिकबाट, मोबाइल अपील: किन भविष्य मोबाइल हो.
टैग: इंफोग्राफ़कमोबाइल अनुप्रयोगमोबाइल अपीलनयाँ सम्बन्ध